အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန်
အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန်
အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန်တစ်ဦးအကြီးအက start ကမ်းလှမ်း ဥရောပတစ်ဝှမ်းရထားခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်. ယခု Michelin လမ်းညွှန် ကမ်းလှမ်းမှု ဥရောပခရီးသွားများအတွက် တစ်ရွေးချယ်ရေး စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်များ တွင် 38 ဥရောပမြို့ကြီးများ. အသစ်သုံးမျိုးမြို့ကြီးများဤဆက်ပြောသည်ပြီ 2019 ထုတ်ဝေ: Zagreb နှင့် Dubrovnik, ခရိုအေးရှား, နှင့်ရက်ယာဗစ်, အိုက်စလန်. အမည်မသိစစ်ဆေးရေးမှူးလေ့ကျင့်သင်ကြား အဆိုပါဂုဏျလျှောက်ထားစဉ်စားသောက်ဆိုင်သို့သွားရောက်နဲ့ရွေးဖို့ Michelin အစားအစာကြယ်-rating system ကို နှင့်များအတွက်အလားတူဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် ဟိုတယ်များ. ရလဒ်: အားလုံးအရသာနှင့်ဘတ်ဂျက်ဘို့အကြံပြုထူထောင်မှုတစ်ခုအကွာအဝေး.
ခရီးသွားများအတွက်ယုံကြည်မှုခံစားရနိုင်ပါတယ် မှီခို Michelin အပေါ်၎င်းတို့၏လုပ်လမ်းညွှန် ရထားခရီးစဉ် ထိုမျှလောက်ပိုပြီးအရသာ! ကျနော်တို့ကဆင်းကျဉ်းပါတယ် အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန်, နှင့်သင်တန်း, တိုင်းမှတ်တိုင်ကိုအလွယ်တကူကြောင်းသေချာခဲ့သည် ရထားအားဖြင့်သုံးစွဲနိုင်!
အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန်: အီတလီ
အီတလီအနုပညာရဲ့ကမ္ဘာရန်၎င်း၏ကြီးမားသောပံ့ပိုးမှုများကိုကျော်ကြား, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, ဖက်ရှင်, တေးသံစုံကဇါတ်, စာပေ, ပုံစံ, နှင့်ရုပ်ရှင် - စာရင်းအပေါ်သွားသည်, ကျနော်တို့တောင်မှအကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင်မြင်ကွင်းတစ်ခုဖို့အလှူငွေဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြပြီမဟုတ်.
အတွက်ကြီးမားသောသတင်း 2019 အီတလီနိုင်ငံသစ်တစ်ခုသုံးကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင်ရှိပါတယ်ကြောင်း, Michelin ရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုဆု!
Uliassi, အီတလီနိုင်ငံရဲ့ Adriatic ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင် Senigallia မှာတည်ရှိပါတယ်, နောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်းများစွာကြယ်ပွင့်အဆင့်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်၎င်း၏ကြာရှည်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောကြယ်သုံးပွင့်ရှိသည်.
စားသောက်ဆိုင်ဘလော့ဂ်အရသိရသည် ဒဏ်ငွေလေးအတွက်အသင့်တော်မိတ်ဆွေတို့ကို. အစ်မနဲ့အစ်ကိုအဖွဲ့ Catia နှင့် Mauro Uliassi နေဖြင့် Run, စားသောက်ဆိုင်ပင်လယ်စာအပေါ်တစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာအာရုံကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်မြည်းစမ်း menus တွေနှင့်ala လှည်းထမင်းစားခန်းနှစ်ဦးစလုံးကမ်းလှမ်း. Uliassi ယခုသည်အခြားကိုးဦးသုံးကြယ်ပွင့်တစ်ခုဖြစ်တယ် အီတလီမှာစားသောက်ဆိုင်. ဤသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သုံးကြယ်ပွင့်များ၏သမျှသောသူတို့ကိုဆိုလိုသည် ခရီးစဉ် သူတို့ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုထိန်းသိမ်းထား, နာမည်ကြီး Modena စားသောက်ဆိုင်အပါအ ၀ င် Osteria Francescana.
Rimini Senigallia မှရထား
Ancona Senigallia မှရထား
Florence Senigallia မှရထား
ယခုရှိပါတယ် 367 အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin ကြယ်ပွင့်, မှတက် 356 ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က.
စာရင်းထဲမသစ်ကို Two-ကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင်ဒီနှစ်ရှိခဲ့သည်. အဆိုပါလမ်းညွှန်တစ်ဦးဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါပါဝင်သည်ပါဘူး 29 နှစ်ယောက်ထက်ပိုတစ်ဒါဇင်ထံမှအသစ်သောတကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင် အီတလီမြူနီစီပယ်. ဤသည်မှစုစုပေါင်းတတ်၏ 318. ယေဘုယျအား, လမ်းညွှန် features တွေ 367 စားသောက်ဆိုင်ကြယ်ပွင့်, မှတက် 356 ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က.
အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန်: ဗြိတိသျှ
"အစားအစာလုပ်ငန်းအော်စကာဆုအတွက်" ဟုအမည်ပေးထားသည့် Waterloo ရဲ့ BFI IMAX ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်အဆိုပါဆုအခမ်းအနားတိုင်းပြည်အနှံ့ကနေစားဖိုမှူးတစ်ဦးမီးမောင်းထိုးပြဖြစ်ပါသည်.
ဒီနှစ်, ဂရိတ်ဗြိတိန်အတွက်အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင်သူတို့ကြယ်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မှစီမံခန့်ခွဲသင်ယူခြင်းငါးစားသောက်ဆိုင်နှင့်အတူထိခိုက်ကျန်ရစ်. ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ Cue သက်ပြင်းချ! အဆိုပါ Araki, စားသောက်ဆိုင်ဂေါ်ဒွန် Ramsay နှင့် Alain Ducasse အဆိုပါ Dorchester မှာခဲ့ကြ လန်ဒန်ထူထောင်မှု သူတို့ရဲ့ဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများအပေါ်ကျင်းပရန်, Heston Blumenthal ရဲ့အဆီဘဲနှင့် Alain Roux ရဲ့ရေနားအင်းပြုသကဲ့သို့, အသွင်ဆောင်လာကြောင်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံး.
များများရှိပါတယ် လန်ဒန်အဘို့ဆောင်သောရထား ဥရောပတစ်လွှားအမျိုးမျိုးသောအချိန်များတွင်. မှဦးခေါင်း SaveATrain အကောင်းဆုံးပိုးကောင်ကိုစစ်ဆေးရန်မိနစ်အတွင်းလက်မှတ်တစ်စောင်ကြိုတင်မှာယူပါ!
အဆိုပါ Michelin လမ်းညွှန် 2019 အပြည့်အဝစာရင်း
အဆိုပါ Dorchester မှာ Alain Ducasse
အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန်: နယ်သာလန်
နယ်သာလန် (သို့မဟုတ်ဟော်လန်) သေးငယ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကျော် icon များဖြင့်ပြည့်နေသည်. တင့်တယ်မီးသီးလယ်ကွင်း, လေရဟတ်, ဒိန်ခဲ စျေးကွက်, သစ်သား ဖိနပ်, အမ်စတာဒမ်၏တူးမြောင်း, ဟောငျးမာစတာ၏လက်ရာ, Delft အပြာရောင်မြေထည်, အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော ရေ-စီမံခန့်ခွဲမှု, နှင့်သန်းပေါင်းများစွာ စက်ဘီး. ထိုအခါစက်ဘီးအဘို့ကောင်းမြတ်ခြင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်. အဆိုပါ 2019 နယ်သာလန်အတွက် MICHELIN လမ်းညွှန်စုစုပေါင်းတစ်အုပ်ရှိသည် 571 စားသောက်ဆိုင်များနှင့် 263 ဟိုတယ်များ. သင်ကလေ့ကျင့်ခန်းလိုတော့တာပေါ့.
ဒီနှစ်မှာတော့ရဲ့ရွေးချယ်ရေး features တွေသစ်နှစ်မျိုးနှစ်ကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင်နှင့် 12 ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့တယောက်ကြယ်ပွင့်ကိုလက်ခံရရှိထူထောင်မှု.
ယခုရှိပါတယ် 89 စုစုပေါင်းတကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင်. Helmond အတွက် Derozario မှာ, Jermain De Rozario အင်ဒိုနီးရှားအစားအစာအပေါ်သူ့ကိုယ်ပိုင်လှည့်ဖျားတတ်၏. တွင် ဧကရာဇ်စားသောက်ဆိုင် Tilburg, ရှင်ပေါလု Kappe ပြင်းထန်သောအရသာနှင့်အတူ coupled သည်သူ၏ခေတ်ပေါ်အစားအစာနှင့်အတူညစာစားပွဲများအတွက်အဆုံးထိ, ရုံ Jeroen Brouwer မှာနဲ့တူ အဆိုပါ Loohoeve Schoonloo နှင့်သောမတ်စ်ဗန် Santvoort မှာ မိန်းကလေး Kerkdriel အတွက်. အရသာများ၏ပြင်းထန်မှုမှာဂျင်မ်နှင့်သူ Mike Cornelissen အားဖြင့်တပ်ဖြန့်ဟာတီထွင်မှုရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့အဘယျသို့လည်းဖြစ်ပါတယ် Rijnzicht Doornenburg အတွက်, ထိုသို့မှာကမ်းလှမ်းဟင်းလျာများ၏ခဲဖွယ်စားဖွယ်င် OONIVOO Uden. ကောင်းသောအစားအစာထဲမှာ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုများအတွက် ဇိမ်ခံ ပတ်ဝန်းကျင်, Bougainville အမ်စတာဒမ်အတွက်, နှင့် ဗော်တဲယား Leersum ၌ရှိကြ၏ အကြွင်းမဲ့အာဏာရမယ်.
Tilburg ရထားမှ Antwerp
ဘာလင် Tilburg မှရထား
ပဲရစ် Tilburg ရထားမှ
အမ်စတာဒမ်ဗဟိုစခန်း အဓိကမီးရထားဘူတာရုံနှင့်မြို့၏အစစ်အမှန်နှလုံးဖြစ်ပါသည်: မသာနာမတော်ဖြင့်အလယ်ပိုင်း, ဒါပေမယ့်လည်းအကြီးမားဆုံးအဖြစ် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လွှဲပြောင်းရာအရပျ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးနေရာကောင်းပါလိမ့်မယ် ရထားဖမ်း လွန်း.
အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန်: စပိန်
မက်ဒရစ် ၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီး စပိန် နှင့်အကြီးဆုံး မြို့တော်စည်ပင်က အဆိုပါနှစ်ဦးစလုံးအတွက် မက်ဒရစ်၏အဝန်း နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကစပိန်.
မက်ဒရစ်ယဉ်ကျေးမှုပွဲကိုခံရမည်. ဒါဟာ 1920 ၏နှလုံးခုန်ခဲ့သည်. ထိုကဲ့သို့သော Ernest Hemingway နှင့် Fitzgerald အဖြစ်စာပေ greats အားဖြင့် Visited, F ကိုဖြစ်သူ Scott နှင့် Zelda, အခြားသူတွေအကြား.
အဲဒါရှိတယ် ချစ်ရန်အစာစျေးကွက်မြင်ကွင်းတစ်ခု, ဒါပေမယ့် Michelin စတားစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုခုကိုလက်လွတ်နိုင်ဖို့သူတွေကိုမဟုတ်!
သင်သည်သင်၏ပထမဦးဆုံးတဦးခင်မှာ, ငါတို့သည်သင်တို့အကြံပြု သင့်ရဲ့ည broody Museo Chicote ဘားကနေကော့တေးနှင့်အတူချွတ်စတင်ရန်. အရပျကိုငျသညျမိမိအအကြိုက်ဆုံးအချိုရည်ကိုရှာတှေ့ကဒီမှာ Hemingway ရဲ့သရဲခြောက်သောနှင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်တစ်ဒါဇင်အခြားသူတွေ. လူအစုအဝေးတက်ကောက်မတိုင်မီအစောပိုင်းအဲဒီမှာခေါင်း.
မက်ဒရစ် ပတ်ပတ်လည်ရှိပါတယ် 3,100 စားသောက်ဆိုင်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးကိုရွေးချယ်အနည်းငယ်ဟာကျော်ကြားခြင်းဖြင့်ကြယ်ပွချီးမြှင့်ခဲ့ကြ Michelin လမ်းညွှန်. ရှိပါတယ် 16 Michelin ကြယ်ပွနှင့်အတူချီးမြှင့်မက်ဒရစ်အတွက်စားသောက်ဆိုင်: DiverXO (ကြယ်သုံးပွ); Santceloni, la Terraza del ကာစီနို, Sergi Arola, Ramon Freixa မက်ဒရစ်နဲ့ El ကလပ် Allard (နှစ်ခုကြယ်များ); နှင့် Kabuki, Kabuki Wellington, DSTAgE, Albora, ဆိတ်သငယ်ကိုများနှင့် Punto MX (တဦးတည်းကြယ်ပွင့်). ဖြည့်စွက်ကာ, မြို့ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ, စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု (အခံွ) နှစ်ခုကြယ်များရှိပြီးသုံးတကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင်ရှိပါတယ်: CASA ဟိုဆေး, Chiron, နှင့် Montia. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအစားအသောက်အစေခံခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပူဇော်.
မက်ဒရစ်မြို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်း Michelin ကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင်ရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါသည် DiverXO (3 အလွကြယ်များ!)
စားဖိုမှူးများ၏ဖန်တီးမှု ဒါဝိဒ်သည်Muñoz ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသဘောကျပြီးအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ရှိ. အေးချမ်းသော, သတ္တိ, တီထွင်ဖန်တီးမှုသည် DiverXO ၏အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်. ရာသီနှင့်အတူဤစားသောက်ဆိုင်ရဲ့ menu ကအပြောင်းအလဲများ, ဒါပေမယ့်နှစ်ခုသာဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်. အဆိုပါ XOW Menu ကိုနှင့် Menu ကိုGlotón XOW. မီနူးနှစ်ခုလုံးသည် တူညီသောအစားအစာကို ပေးဆောင်ကြပြီး အရေအတွက်နှင့် ဈေးနှုန်းမှာသာ ကွဲပြားပါသည်။.
အဲဒီမှာရယူခြင်း: အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင်၏ဤရွေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက Metro အားဖြင့်ဖြစ်တယ်, ပြီးတော့ Tetuan ဘူတာများတွင်ချွတ်ရတဲ့ (လိုင်း 1).
ရထားဥရောပတွင်ဤအရပ်တို့ကိုမဆိုတဦးတည်းမှရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသိလို? တစ်ဦးကရထား Save ဒါပေါ့! အကောင်းဆုံးကိုဈေးနှုန်းများကိုရှာဖွေကြှနျုပျတို့၏ website မှကိုကျော်ပေါ်ဦးခေါင်းကို, စက္ကန့်အတွင်း!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-restaurant-michelin%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#Michelin	#michelinstar	#နယ်သာလန်	အစာ	eng	ခရီးသွား	ခရီးသွားခြင်း	netရာဝတီ	travelspain